राष्ट्रिय झण्डा परिवर्तनको कुरा | eAdarsha.com
राष्ट्रिय झण्डा परिवर्तनको कुरा
राष्ट्रिय झण्डा त्यो देशको र सरकारको प्रतीकको रुपमा चिनिन्छ । नेपालको झण्डा विश्वभरिका देशहरूको भन्दा फरक भएको एकमात्र झण्डा हो । नेपाल बाहेक सबै देशको झण्डा आकारको हिसाबले रेकटेङगुर छ अथवा स्क्वायर छन् तर नेपालको झण्डा त्रिकोणात्मक रहेको छ जुन कतिपय बेला विभिन्न देशहरुले सामान्य ज्ञानमासमेत राखेको पाइन्छ । राष्ट्रिय झण्डा जलाउनु , फेर्नुको कारण के हो बुझ्न सकिएन । झण्डा फेर्नु त्यति सजिलो छैन ।
एउटा झण्डाको सट्टा अर्को राख्दा कुनै चिन्ह नयाँ राख्नुपर्दछ, त्यसमा सबैको चित्त बुझ्छ भन्ने छैन र यदि फेरेमा त्यो चिन्ह सबैलाई मान्य हुनु पर्दछ । झण्डा फेर्नु पर्ने कारण सबैलाई चित्त बुझ्नु पर्दछ । त्यसैगरी झण्डाको आकार, रङ्ग र ती रंगहरूको समन्वयात्मक रुपमा मिलान, त्यसमा राखिने चिन्ह तिनीहरू सबैको राष्ट्रिय हित अनुसारको अर्थ र व्याख्या आदि बुँदाहरूमा ध्यान दिनुपर्दछ । कतिपय देशहरुमा ठूलो क्रान्तिपछि पुरै फेरिएको राजनीतिक व्यवस्था अन्तर्गत आएको सरकारले झण्डा परिवर्तन गरेको पाइन्छ । जुन स्वाभाविक पनि होला । तर हाम्रो देशमा त त्यस्तो ठूलो राजनीतिक परिवर्तनसहित आएको व्यवस्था होइन ।
हिमाल, पहाड नदीनाला अन्य प्राकृतिक वस्तुहरू उहिलेकै छन् के फेर्न सकिन्छ? सम्झौताबाट आएको संविधान र राजनीतिक व्यवस्था अन्तर्गत बनेका ऐन, नियम कानुन र त्यसमा रहेका दस्तावेजहरु हामी सबैले मान्नुपर्दछ।
यो परिवर्तन त राष्ट्रप्रमुखको प्रकृति परिवर्तन हुनु र नयाँ संविधान आउनु बाहेक व्यवस्था परिवर्तन भएको त होइन । त्यसमा पनि अहिले प्रचलनमा रहेको राष्ट्रिय झण्डा सबै दलहरु र संविधानसभाले पारित गरी संविधानमै उल्लेख गरिएको झण्डा हो । फेरि यो झण्डामा कुनै एक पक्ष या एक समुदायको संस्कृतिसँग सम्बन्धित विशेष चिनो पनि राखिएको छैन । हाम्रो राष्ट्रिय झण्डामा ब्रह्माण्ड सृष्टिको मूल आधार सूर्य, चन्द्रमा र रङ्गको हिसाबले रातो, नीलो राखिएको छ, जुन कुनै पनि समुदायलाई घोच्ने बिजाउने देखिँदैन । सूर्य र चन्द्रमा ब्रह्माण्ड रहेसम्म अटल रहने त्यस्तो चिन्ह भएको हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा किन कसैलाई बिझाउँछ ?
यदि बिझाउँछ भने विभिन्न शंका उपशंकाहरु देशप्रेमी नेपालीहरुलाई लाग्नु स्वाभाविक हुन्छ । विभिन्न महादेशहरुमा भएका देशहरूको झण्डाको चिन्हहरु अध्ययन गरौ भने १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म देशका राष्ट्रिय झण्डाहरुमा सूर्य चन्द्रमा वा ताराहरु कुनै न कुनै राखेको पाइन्छ । कतिपय राजनीतिक समूहको नेतृत्व गर्ने नेताहरुबाट यो झण्डा राणाकाल, पञ्चायतकाल आदिदेखि नै चलनमा आएको र त्यो तानाशाही शासन भएको समयमा प्रयोग गरिएको झण्डा भएकोले जनतामा कता–कता नकारात्मक धारणा छ ।
त्यसैले झण्डा फेरिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने तर्क सुनिन्छ । यदि त्यसो भन्ने हो भने यो देश नेपाल र नेपालीहरू पनि राणा र पञ्चायतकालका पनि छन् के उनीहरुलाई पनि फेर्नुपर्ने हो ? त्यसैगरी विभिन्न हिमाल, पहाड नदीनाला अन्य प्राकृतिक वस्तुहरू उहिलेकै छन् के फेर्न सकिन्छ? सम्झौताबाट आएको संविधान र राजनीतिक व्यवस्था अन्तर्गत बनेका ऐन, नियम कानुन र त्यसमा रहेका दस्तावेजहरु हामी सबैले मान्नुपर्दछ। सानातिनो सन्दर्भ हरुलाई ठूलो बनाउँदा धेरै कुरामा समस्या हुन्छ । जुनसुकै किसिमको झण्डा फेरेर ल्याएपनि त्यो सबैलाई चित्त नबुझ्न सक्छ, त्यस अवस्थामा के झण्डै नराख्ने, देशको झण्डै नहुने ? त्यसैले यस सम्बन्धमा कुनै विवाद नगरी रहनु नै राम्रो, सबैमा चेतना भया ।